Nampahafantarina an’ireo mpianatra ny atao hoe fiahiana ara-tsosialy ny CNaPS - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mizara telo ny salon. Misy ny resaka sampam-pampianarana ambony sy ny orinasan- tserasera na “call center”, ary eo koa ny resaka asa na olona hiditra ao anaty sehatry ny asa (na recrutement). Mahakasika ity farany no isan’ny tena niantsoana ny CNaPS satria ny « Ressources Humaines » an’ireo orinasa ireo no tena misahana ny fampidirana mpiasa sy ny olona hiditra ao anaty ny sehatry ny asa ka mila mahalala ny anjara asan’ny CNaPS izy ireo. « Ny CNaPS no miahy ny zon’ny mpiasa sy tompon’andraikitra voalohany amin’ny resaka fiahiana ara-tsosialy dia izay no antony niantsoana ny Tahirim-pirenena na CNaPS hitondra fanazavana bebe kokoa amin’ireo izay mbola tsy mahalala ny tena andraikitra sahanin’ny CNaPS », hoy i Raveloson Hajatiana, Aide Manager eo anivon’ny Assidu Madagascar, orinasa mpikarakara ny hetsika.
Amin’ny maha andrim-panjakana misahana ny mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina ny Tahirim-pirenena momba ny Fiahiana ara-tsosialy (na CNaPS) dia izay antony izay indrindra nandrisika azy handray anjara mavitrika tamin’ny hetsika. Maro ny tolotra omen’ny CNaPS ny mpitsidika ny tranoheva nandritra ny hetsika toy ny fampahafantarana ny momba ny CNaPS, ny zo sy ny andraikitry ny mpiasa na ny mpampiasa. Fa ny tena nanintona ny maro dia ny famelabelaran-kevitra nentin’i Rakotomalala Yvan, Mpandrindra ny sampandraharaha eo anivon’ny CNaPS Foibe, mitondra ny lohahevitra hoe « Miasa hatrany anaty fahatoniana ». Ny famelabelaran-kevitra dia natao ny tolakandron’ny zoma 17 aogositra. Nampahafantariny an’ireo mpianatra nanatrika ny famelabelarana tamin’izany ny voina ara-piaraha-monina mety hahazo ny mpiasa toy loza amperin’asa, ny tsy fananana asa tampoka, ny aretina azo avy amin’ny asa, ny fahanterana, sy ny maro hafa. Ary novelabelariny ihany koa ny antony samihafa mety mahatonga izany sy ny mety ho voka-dratsiny. Nohamafisiny fa rehefa mihena ny hery entina miasa dia mitombo ny fandaniana ara-bola. Maro ny sampandraharaha miahy ny mpiasa, ka dia nampahafantariny tao amin’ny Carlton fa manana andraikitra lehibe amin’izany ny CNaPS amin’ny fiahiany ireo mpiasa tsy miankina rehetra. Nambaran’i Rakotomalala Yvan fa : « tandindomin-doza foana ny olona rehefa any amin’ny toeram-piasana ary tokony ho mailo hatrany rehefa miatrika ny asa, ary tokony samy handray ny andraikitra tandrify azy ny rehetra amin’ny fiarovana ny ain’ny mpiasa ».
Isan’ireo nanatrika ny velan-kevitra i Rakotomalala Tiavimanjaka Ferdinand mpianatra taona fahatelo amina sekoly ambony tsy miankina ao Ampefiloha. « Zava-dehibe ny CNaPS na eo amin’ny resaka fisotron-dronono izay mbola any lavitra be any fa eo koa ny fiahiana ara-tsosialy mandavan-taona. Ny CNaPS dia manamora ny fiainan’ny mpiasa eo anivon’ny toeram-piasana raha tsy hiresaka afa-tsy ny loza amperin’asa, ny fanampiana omeny ho an’ny vehivavy bevohoka sy ny teraka ary koa ny volan-jaza » ho izy.